Ndakabata zimboro rake ndikanzwa richidziya ndokuisa mubeche rangu! - Masasi eHarare
Crazy News Ndakabata zimboro rake ndikanzwa richidziya ndokuisa mubeche rangu!
Ndakabata zimboro rake ndikanzwa richidziya ndokuisa mubeche rangu!
Marggie ainge akarota rino zimboro ndokubva akutanda kuzvibata asi akakanganwa kuvhara macurtains zvekuti mudhara wepa next door aiwona achidongorera.
Ndakavhura maziso ndikawona ndiri ndega ndakarara pacouch mudinning bhurugwa riri muma ankles skirt iri muwaist. Mawoko angu ainge ari pakati pemakumbo apa zvigunwe zvangu zvakatota. I remember ndainge ndarota ndayenda musango mandainge ndasangana nemumwe murume ainge ane rino zimboro tikasvirana zvekuti akandisiya ndichingofunga kuti I hope ndichamuwona futi.
Ndakavhunduka ndichiwona mudhara wepa next door akamira pawindow rangu ndipo pandakaita realise kuti beche rangu rese rainge riripanze and ndiro rainge akatarisa. Ndakadeedzera ndichituka kuti urikuitei pawindow pangu, apa ndichitsvaga something kuti ndizvivhare.Ndakabvunza kuti murikudei pawindow pangu then ndakabva ndafunga kuti I am sure anga achiwona kuxvibata kwandanga ndichizviita time yandanga ndichirota. Ndakabva ndamubvunza kuti wamira ipapo nguvai, akapindura kuti ndauya with the veggies awaida ndikaridza bell but hauna kupindura. Ndangandichiziva kuti uripo that’s why ndauya pawindow ndichiti nditore attention somehow, ndipo pandawona wakarara pacouch skirt iri ,uwaist wakavhura makumbo.
Ndakabva ndati what exactly did you see, apa ndainge ndakutobhoikana nezvainge zvaitika izvi “Eh, wanga uchikwizirira beche rako and wanga uchiratidza kuti you are enjoying yourself, kana pono inosara pasi handidi kunyepa ndabva ndanzwa kuda, oh my God ndanga ndichirota ndichisvirwa nezimboro zihombe, I am sorry mawona zvinhu zvakadaro. Mudhara uya akabva ati sori yei I really enjoyed myself as well, achiseka hake inini ndokubva ndatangawo kuseka naye. It must have been 10 to 15minutes wandiita kuti ndinzwe kuda kusvira. “Oh my god, was I doing that? Yes wanga uchizvikoira nezvigunwe two apa wakaita kushama muromo, you were pumping beche rako I am surprised hauna kuzvikuvadza.
I felt confused and embarrassed kuti mudhara uyu awona beche rangu rakavhurika wide open but kamwe kamoyo kaitofara kuti ndamuita kuti anzwe kuda zvekutanga kubonyora nekubata bata mboro yake pamberi pangu. Ndakamuti handei ku kitchen ndinokuitirai tea haa ndakunzwa kunyara now, ndainge ndakafuratira ndichiita boil kettle ndikanzwa zvakunzi manje tichaita sei neizvi, ndakacheuka ndikawona munhu akabata mboro yake apa yairatidza kuti yakamira sesimbi. Ndakaramba ndakatarisa mboro yavo ndikawona inini ndakutoita zemo zvekutodawo kusvirwa, ndakadzokera navo kudinning and this time ndakatanga ndavhara ma curtains, pandikacheuka ndakawona munhu atodzikisa trouse zimboro rakarembera nemazichende apa ndakabva ndapera simba beche richibva ratanga kutota and I was back in the dream.
Ndakabata zimboro rake ndikanzwa richidziya mumawoko angu ndikabva ndazviudza kuti ndinotofairwa kuiswa nhasi even though imwe pfungwa yaiti ndimudzinge since ndaiziva mukadzi wake but ndakazviudze kuti I have to take advantage ndizwewo kunaka kwemboro yavo.Ndakagara on the edge of the couch ndikabva ndasimudza skirt yangu ndokushadabura makumbo kuti vanyatsoona beche ravanga vachimbowona nepa window ndokubva ndarara nemusana.Mudhara uya akaratidza kushamisika nezvainge zvakuda kuitika asi akabva apfugama ndichiwona mboro yake iri pamuromo webeche rangu. Vakaramba vakatarisa beche rangu for a while ndokubva vanditarisa mumaziso, ndakagutsurira ndikawona munhu akugadzirira kuisa mboro yake mubeche rangu and the smile manje kuita kunge he is about to fulfil his fantasy.
Ndakawona murume achiratidza kufarira as he was about kupinza mboro yake mubeche rangu, ruwoko rwake rwaidedera achiita kufambisa chigunwe chake pakati pebeche rangu asi handina kumumisa nekuti zvaibva zvawedzera zemo rangu ndichinzwa kuta beche rangu rainge ratozvimba nekuda kusvirwa. Akanangisa mboro yake pabeche rangu achiratidza kutya kunge ndichati mira asi ndainge ndatonzwa ndakutofemera pamusoro ndamirira kutambira mboro yake and she was waiting for it. Ndakapushira mboro yake mubeche rangu ndichiinzwa ichinyura zvishoma nezvishoma “Oh that feels good” ndakadaro ndichimuudza kuti ndirikuda kunzwa mboro yake yese mukati mebeche rangu.
Nekunakirwa kwaiyita mudhara uyu aitarisa mboro yake ichinyura mukati mebeche rangu , ndokubva anditarisa mumaziso futi inini ndaigoti yesss yesss ndisvirei kani. Ndakarara ndakatarisa mudenga ndichiterera nekunzwa zimboro rababa vepa next door rakazadza beche rangu ndaida kuti andisvire ne pace yake iye pasina kumhanya ko taive nezuva rese. Ndakaisa makumbo angu pamashoulders avo ndichiita kunge ndichavadzipa nezvidya zvangu, apa murume achisvira zvisingaite ndichinzwa mboro ichipinda nekubuda mubeche rangu. Occasionally ayiti akakoira omira otarisa mboro yake achiwona ichipinda mubeche zvinesimba achiratidza kunakirwa nezvaaiyita zviya zvemunhu asvika dream girl wake. Mudhara aiyerera misodzi yekunakirwa achiita kupomba beche rangu apa machede achirova magaro angu, apomba zvinesimba.
zimboro rake ndikanzwa richidziya